Seismogram: ihe ọ bụ na etu esi atụ ala ọma jijiji | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe ala ọma jijiji mere, anyị aghaghi ịmara ihe ndekọ ya ga-enwe ike ịghọta ma ọ bụrụ na enwere ike nwee nsogbu ọzọ. Ebe edere ngagharị nke ala bụ seismogram. Seismogram bụ eserese ebe edere ndekọ ndị ejiri seismograph tụọ. Ọrụ seismograph bụ isi bụ ịtụ ọsọ na ụdị ebili mmiri na -eme n'oge ala ọma jijiji.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị otu seismogram si arụ ọrụ na ihe dị mkpa ndekọ ala ọma jijiji.
1 Otú ala ọma jijiji na-adị
2 Gịnị bụ seismogram
3 Otu anyị si atụ ala ọma jijiji
4 Seismogram na ndekọ
Otú ala ọma jijiji na-adị
Ihe mbụ bụ ịmata etu ala ọma jijiji si amalite. Dị ka anyị maara, e kewara eriri ala ahụ n'ime efere tectonic. Mkparịta ụka dị n'etiti efere tectonic a bụ isi ihe kpatara ala ọma jijiji. Ka o sina dị, ọ bụghị naanị ya. Usoro ọ bụla nke nwere ike nweta nnukwu ume dị na okwute ezuola iji mepụta ala ọma jijiji. Ogologo ala ọma jijiji dị otú ahụ ga-adabere na mpaghara nrụgide nrụgide na ihe ndị ọzọ.
Anyị ga-ekwu okwu ugbu a gbasara ihe ndị nwere ike ibute ala ọma jijiji:
Tectonic efere: Dị ka anyị kwurula na mbụ, e nwere ọtụtụ ala ọma jijiji nke na-esite na nchupu nke ụfọdụ tectonic plate ndị mejupụtara ụwa. Ala ọma jijiji ndị a na-emepụta ụdị ebili mmiri dị iche iche nke seismograph na-edekọ ma jide ya na seismogram. Ala ọmajiji ndị a na-emetụtakarị nnukwu ala ma ọ bụ ya na-ebutekarị nsogbu.
Mgbawa ugwu: ọ bụ ebe a na-adịkarịkarị ala mana ọ nwekwara ike bute ala ọma jijiji. Ọ bụrụ na mgbawa ugwu mgbawa na-eme ihe ike, ọ nwere ike ibute oke egwu na-emetụta ebe niile dị nso. N’agbanyeghi n’eziokwu na o nwere ike iweputa ala oma jijiji, uzo ihe o n’eme pere mpe ma oburu na anyi tunyere ya site na nka.
Site na imikpu: ọ bụrụ na mmiri na-aga n'ihu nke mmiri mmiri emeela n'ime eriri ahụ, ha na-ahapụ agụụ ma na-ahapụ ibu nke akụkụ nke elu. Ọdịda nke ụwa a na-eme ka ịma jijiji dị ka ala ọma jijiji. Ugboro ha dị obere ma ha na-emetụta obere oke.
Ala mbuba: O nwekwara ike ime na ịdị arọ nke ugwu ahụ n'onwe ya nwere ike iwepụta ụfọdụ ala ọma jijiji site na ime ka mbuzo na mmejọ ahụ. Ha abụghị nnukwu ala ọma jijiji, kama ọ bụ obere ebili mmiri.
Ihe mgbawa atom: A na-eme ha n'oge nyocha mmadụ na bọmbụ atọm. O doro anya na ọ ga-ekwe omume ịchọpụta na enwere mmekọrịta dị n'etiti mmegharị ala na mgbawa nke bọmbụ atọm.
Gịnị bụ seismogram
Mgbe ala ọma jijiji malitere izipu ebili mmiri site na etiti hypo ruo ebe etiti, akụrụngwa amaara dị ka seismograph bụ maka ịdị ukwuu nke ebili mmiri ndị a. Edekọtara ihe niile ebili mmiri na-eme na seismogram. Seismogram nwere ike ịnakọta ozi niile nke ala ọma jijiji. N'ime ya, edere oge, ike, ọsọ na anya nke ala ọma jijiji ahụ mere.
Ebe ọ bụ na ọsọ nke ụdị ebili mmiri dị iche iche, ha nwere ike inye nnukwu ozi gbasara ala ọma jijiji n'onwe ya. Mmiri P bụ ndị isi nwere oke ọsọ. Ebili mmiri bụ ndị na-eji nwayọ nwayọ. A na-akpọ ha ebili mmiri. Ọdịiche dị n’agbata ọsọ ọsọ nke ụdị ebili mmiri ọ bụla bụ nke e ji amata ebe ala ọma jijiji si malite.
Otu anyị si atụ ala ọma jijiji
Ike ala ọma jijiji na-eme n'ụdị ịma jijiji. A na-edeba ebili mmiri mmiri a site na seismograph. Ngwaọrụ a ga - egosi ike na ịdị ukwuu nke ịma jijiji nke ebili mmiri ala ọma jijiji. The seismogram na-atụ a dum usoro nke zig-zags na akwụkwọ ebe, ke akpatre, ike niile ebili mmiri nke ala ọma jijiji ahụ nwere ga-anọchi anya ya.
Nke a bụ ebe anyị nwere ike ịhụ oge, ọnọdụ na ike nke ala ọma jijiji ahụ dabere na ozi ekpughere na seismogram. O nwekwara ike ikpughe ihe ọmụma banyere ụdị nkume nke ebili mmiri ala ọma jijiji gafere.
Seismogram tụrụ bụ nke Richter n'ọtụtụ. Ejiri ọnụọgụ seismologist Charles Richter mepụtara ọnụọgụ a na 1935 na ụkpụrụ ya sitere na 1 ruo n'isi njedebe. Nke a quantitative nha. Ọ bụ ọrụ ya iji tụọ ike ala ọma jijiji nke ewepụtara na ala ọmajiji ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị ike ya. Ihe o ji adabere na njupụta nke ebili mmiri nke seismogram dekọtara.
Ruo taa, nke a bụ ụzọ a kacha mara amara na nke kachasị were iji kọwaa ala ọma jijiji. Na tiori na enweghi oke onodu a, mana onodu 9 putara mbibi zuru oke. Ala ọmajiji kacha ukwuu mere na akụkọ ihe mere eme mere na Chile na 1960 wee ruru 9.5 na ọkwa Richter.
Seismogram na-edekọ usoro okike ma ọ bụ nke artificial. Ebumpụta ụwa a sitere na nsụgharị kọntinent nke tectonic. Esemokwu abụọ, esemokwu n'etiti ihe ndị gbara ya gburugburu bụ taa ịkụghasị ihe ndị ahụ na - ewepụta ike n'ụzọ dị iche iche. Formsdị ndị a na-abụkarị site na ebili mmiri. Ọsọ ọsọ nke oscillations ndị a na-aga site na ọkara nwere ike ịbụ nnukwu ozi iji mara hypocenter nke ala ọma jijiji ahụ. All ndị a oscillations nwere ike hụrụ na a seismogram.
Seismometer nwere ihe abụọ: ihe nkedo na ntanetị. O nwere ike ịdenye ihe mgbaàmà ahụ na akụkụ ya abụọ na mgbakwunye na nke atọ nke kwụ ọtọ. Ebumnuche bụ ike chọpụta ezi ọsọ nke ebili mmiri ala na-enwe ike ịchọta ebe kwesịrị ekwesị ala ọma jijiji ahụ. N'ịmara ebe etiti ala ọma jijiji ahụ, ọ ga-ekwe omume ịmata na epicenter ga-anọ na vetikal.
Seismogram na ndekọ
Site na seismogram, a na-ahụ ọsọ nke ebili mmiri na-ebugharị ebigharị, nke na-abụkarị ebili mmiri ma ọ bụ ebili mmiri nke anụ ahụ (P ebili mmiri na ebili mmiri S). Oke mbu edebara aha bu P ebe obu ya bu onye nwere oke oso.
Dị ka ụdị nke seismic omume e nwere ọtụtụ ụdị seismogram. Enwere seismogram maka obodo, mpaghara, teleseismic ihe, mgbawa nuklia, nnukwu ala ọma jijiji, mmegharị ugwu mgbawa na ala ọma jijiji mgbawa ugwu. Typesdị ndị a niile na-emepụta akara dị iche iche na njirimara nke ha nke na-enyere seismogram aka igosi ụdị ihe merenụ.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere seismogram.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Seismogram